Golaha Ammaanka oo ka shiray arrimaha Soomaaliya iyo Ra'iisul Wasaare Rooble oo warbixin... - Home somali news leader
Home NEWS Golaha Ammaanka oo ka shiray arrimaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaare Rooble oo...
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta shir ka yeeshay arrimaha Soomaaliya, iyadoo shirkaan warbixin looga dhageystay Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya iyo Wakiilka Midowga Afrika.
Shirkan oo ahaa dhanka aallada foggaan araga ee Zoom-ka ayaa waxaa ka qeyb galay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa sheegay in doorashada Soomaaliya ee soo socota ay tahay inay noqoto mid daah furan, cadaalad, lana wada aqbalsan yahay, sidoo kalena ku dhacda si nabad ah.
Mr Swan ayaa sheegay inay qasab tahay in doorashada ay noqoto mid ka qeyb gal badan, kana midnimo badan doorashadii 2016.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shirka uga qeyb galay dhanka qadka Zoom-ka ayaa ka warbixiyay heshiiskii siyaasadeed ee doorashada oo u dhaxeeyay dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Waxaa uu sheegay in doorashada Baarlamaanka ay dhici doono dhamaadka sanadkan iyo doorashada hoggaanka dowladda Federaalka ay dhici doonto horaanta sanadka soo socda 2021.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa sheegay inay ka go’an tahay in doorashada ay ku qabsoonto qaab xor ah, kuna dhacda waqtigeeda, isagoo caddeeyay in la ilaalinayo qoondada haweenka ee 30%
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu guddi u saaray oo keena qaabka loo marayo doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka dhacda sanadka 2020/2025, isla markaana qoraal qabyo ah la horkeeni doono Golaha Wasiirada.
Intii uu shirka socday ayaa waxaa ka haday Wakiilada Golaha Ammaanka u fadhiya dalalka Faransiiska, UK iyo Mareykanka, waxaana ay iyana muujiyeen sida loogu baahan yahay doorasho waqtigeeda ku dhacda, si nabad, xor iyo xalaal ah.
Previous articleOxford AstraZeneca oo soo saartay Tallaal waxtar leh Covid19
Next articleChaos erupts at Shanghai airport as authorities try to detain workers there for Covid-19 testing